निर्वाचन आयोगले क-कसलाई सोध्यो स्पष्टीकरण ? – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
निर्वाचन आयोगले क-कसलाई सोध्यो स्पष्टीकरण ?
२२ बैशाख २०७९, बिहीबार १४:१७
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी व्यत्ति, संघसंस्था र पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कोइरालाले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएपछि आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
उक्त निर्वाचनमा आयोगले एक जना उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । निर्वाचनपछि कोइरालाले आयोगमा बुझाएको रिपोर्टमा आफूले निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । कोइरालालाई स्पष्टीकरण बुझाएपछि आयोगले उहाँलाई सचेत समेत गराएको थियो ।
स्थापितले उक्त कार्यक्रममा एक जना महिलालाई आक्रोषित हुँदै ‘यु आर नाइस लेडि तर तपाईँको थुतुनो ठीक छैन’ भन्ने जवाफ दिनु भएको थियो । स्थापितले ‘यो बहिनीले वेश्यावृति गर्छ भनेर म पनि छपाउँ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभभएको थियो । त्यसपछि आयोगले उहाँसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्थापिततले साहका बारेमा ‘एउटा फुच्चे भन्ने बालेन साह रहेछ, उ त अन्तर्राष्ट्रिय ठग रहेछ…’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहित प्रतिकूल गतिविधि गरेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पनि जवाफ मागेको छ । माओवादीले कलैया उपमहानगरपालिका-२३ का वडाध्यक्ष बिक्रम साह लगायतका व्यक्तिहरुले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्टसहित प्रचारमा देखिएको समाचार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएपछि दलबाट भएको हो वा होइन ? भनि आयोगले जवाफ मागेको हो ।
आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । उहाँले अग्निपीडित मुक्त कमैयाका घर बनाई दिने प्रतिवद्धता जनाएपछि स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले अग्निपीडित मुक्त कमैया परिवारलाई एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अन्गर्तत घर निर्माणका लागि तत्काल प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको थियो ।
यही बीचमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका-४ का अध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । वडा अध्यक्ष चौधरीले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी गतिविधि गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । चौधरीले दुर्गा भगवती वडा नं ५ का एक जना महिलालाई दुई हजार रुपैयाँ नगद दिएको र अर्को एक जनालाई पाइप वितरण गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।
आयोगले नेपाल राष्ट्र आधारभूत विद्यालय कपिलवस्तुका प्रधानाध्यापक प्रल्हाद पाण्डेसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । उहाँ दलीय चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न रहेको भन्दै फोटोसहितको समाचार प्रकाशन भएपछि निर्वाचन आयोगले उहाँसँग जवाफ मागेको हो ।
आयोगले मेलम्ची नगरपालिका-१० का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमृत खनाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । मतदाताको पाउमा एक हजारको नोट राखेर भोट माग्दै गरेको फोटोसहितको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएपछि आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो ।
आयोगले महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) सँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । ओरेकले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख पदका नेकपा ९एमाले०का उम्मेदवार केशव स्थापितबारे जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको जनाउँदै स्पष्ट पार्न भनेको हो ।
धादिङको गल्छीमा बस दुर्घटना, ३० जना
दाङमा मोटरसाइकल र साइकल ठोक्किँदा दुईजनाको
कांग्रेसका बुढाथोकी वडाध्यक्षमा बिजयी
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक
मञ्चलाई राखेपको स्वागत र